Mizzima TV Weekly, Business News No . 10 (Sat9March , 2013) | OurGoldenNews.com
Mizzima TV Weekly, Business News No . 10 (Sat9March , 2013)
အပတ်စဉ် စီးပွားရေးသတင်း (၁၀)
ဒီတပတ်အတွက် တင်ဆက်ပေးသွားမယ့် သတင်းတွေထဲမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး အသွင်ကူးပြောင်းလာတဲ့အချိန်မှာ ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတချို့ ဘယ်လို အပြောင်းအလဲတွေ လုပ်နေပြီလဲ၊ မြန်မာ့စက်မှုလယ်ယာကဏ္ဍမှာ စက်မှုလယ်ယာကို ပြောင်းလဲပစ်ဘို့ လုပ်ငန်းရှင်တွေက ဘယ်လို ပါဝင်နေကြပြီလဲ၊ ပြည်ပကို သစ်အလုံးလိုက်တင်ပို့မှု ရပ်ဆိုင်းတော့မှာကြောင့် သစ်အချောထည်ဈေးကွက် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ၊ ရန်ကုန် – ဒလ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ဘယ်သူတွေက ဘယ်လို ၀င်ငွေတွေ ရရှိနေကြသလဲ စတဲ့ သတင်းတွေအပြင် တခြား စီးပွားရေးသတင်းတွေကိုလည်း တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။